Ukubukezwa kwe-Semalt: 15 I-Free Data Data Scraping Software
ama-web scrap inguquko ingasetshenziswa ngamathuluzi okuhlukana ahlukahlukene kanye nezinhlelo zedatha yedatha. Lawa mathuluzi asebenzisana namasayithi, abone futhi aqoqe ulwazi oluwusizo, futhi awuthathe ngokusekelwe ezifunweni zakho. Ngaphezu kwalokho, balondoloza idatha ekhishwe kwi-yolwazi yabo noma bayilanda kumshini wakho wekhompyutha. Lapha sikhulume ngamathuluzi angu-15 angcono kakhulu wokuhlamba iwebhu ku-intanethi.
1. Umpheki omuhle
Umtapo omkhulu wePython owenzelwe ukukhipha amafayela we-XML ne-HTML. Udinga nje ukufaka futhi usebenze leli thuluzi lokukhipha iwebhu futhi uvumele lenze imisebenzi ehlukahlukene. Ungayisebenzisa ngokushelelayo izinhlelo zeDebian neBuntu.
Lokhu kungenye yamathuluzi angcono kakhulu okukhipha idatha . Ivumela ukuthi sibhekane nolwazi kusuka kokubili kokuyisisekelo kanye nentuthuko isayithi futhi ine interface yesimanje, yomsebenzisi-friendly.
i-Mozenda iyisofthiwe yokukhipha isikrini kanye nedatha yokususwa kwedatha. Inikeza okuqukethwe ezinhlobonhlobo zefomethi futhi yi-point-and-click scraper.
I-web scraper ebonakalayo engasetshenziswa ukuqoqa ulwazi kusuka kwi-inthanethi. Ungakha i-API kusuka kumasayithi ahlukene usebenzisa lolu hlelo.
I-Octoparse iyithuluzi le-web scraper kanye ne-extraction tool kubasebenzisi be-Windows. Ingakwazi ukuguqula ulwazi oluhlelekile noma olungahlelekile kumathakasethi akhiwe ngaphandle kwesidingo samakhodi.
Ngenye yezindawo ezinhle kakhulu amahhala web scraper amahhala, izinhlelo zokukhipha idatha, kanye nabakwa-crawlers. Kukuvumela ukuthi uskena amasayithi ahlukene futhi wenze ukukhahla kwamakhasi akho ewebhu kube lula
Yisisombululo esiphezulu sezinkinga ezihlobene nedatha. Udinga ukulanda lolu hlelo, thumela isicelo bese uthola idatha ekhonjiswe njengezifiso zakho. )
8. I-Crawl evamile
Kuyaziwa ukuthi inikeza i-dataset evulekile yamakhasi ewebhu aqhamukayo. Iphendula idatha eluhlaza ibe ifomu ehleliwe futhi ehleliwe, ihlunga imethadatha kubasebenzisi, iphinde ihlinzeke ngolwazi oluhlukile
Kuyinto isevisi yokukhipha idatha ngokuzenzekelayo enezici eziningi kanye nezakhiwo. Ingakwazi ukukhipha futhi iguqule idatha yakho eluhlaza ibe ifomu elihlelekile, inikeze imiphumela ku-JSON futhi Amafomethi e-CSV.
10. Okuqukethwe kwe-Grabber
Kuhle kakhulu kulabo abafuna ukukhipha idatha emifanekisweni namavidiyo ahlukene. f amabhizinisi futhi kukuvumela ukuthi udale i-ejenti yokwehlisa web web.
Yona kuphela i-data scraper eyenziwe ngokuzenzakalelayo ehlela idatha yakho iphinde iqheke amakhasi akho wewebhu ngaphakathi kwemizuzwana embalwa. Kuyafaneleka kubathuthukisi kanye nabahleli futhi bangavula isayithi lakho libe ngama-API.
13. Idatha ye-Scraping Studio
ifika kumabili amahhala nama-premium izinhlelo futhi isiza ulwazi lokuvuna kumakhasi amaningi ewebhu, amadokhumenti e-PDF, amafayela we-XML nama-HMTL. Lolu hlelo lokusebenza lwedeskithophu lutholakala kuphela kubasebenzisi be-Windows.
14. I-Web Extract ye-Easy
Yona uhlelo olubonakalayo lwe-web scraper ne-data extraction olufanele imikhiqizo ephezulu kanye nokuqala. Iqukethe izici ezihlukahlukene ezihlukile futhi idatha kusuka kumafayela ahlukene we-HTTP.
Ukuvumela ukuthi wakhe amaphrojekthi ahlukene ngerekhodi yakhe enkulu futhi ungenye yamathuluzi okudabula idatha okupholile. Ithola ulwazi oluwusizo kusuka kumakheli e-imeyili nezindawo zokuxhumana nabantu Source .